Wednesday September 05, 2018 - 11:04:40 in Wararka by Super Admin
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa lafilayaa in dhowaan ay Wakiil cusub usoo magacaawdo gummeysiga dowladaha shisheeye ku hayaan dalka Soomaaliya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in labedelayo Jeneraalka howlgabka ah ee udhashay wadanka Ingiriiska Ninka lagu magacaabo Micheal Keating oo muddo sanada ah UN-ka wakiil uga ahaa Soomaaliya.
Diblumaasi udhashay wadanka Koonfur Afrika muddo sanada ahna la shaqeynayay Q.Midoobe ayaa lafilayaa in loo magacaabo Ergayga UN-ka uqaabilsan Soomaaliya.
Nicholas Haysom oo hadda ah Ergayga Q.Midoobe uqaabilsan Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa lafilayaa in loosoo wareejiyo magaalada Muqdisho halkaas oo uu ka hoggaamin doono danaha gumeysatada Soomaaliya.
Ninkan ayaa horay ugusoo fashilmay muhiimaddiin UN-ka ee wadamada Afghanistan iyo K/Suudaan oo ah wadamo dagaallo lagu hoobtay ay wali ka socdaan.
Nicholas Haysom ayaa kasoo jeedo dadka caddaanka Koonfur Afrika waxayna magacaabistiisa Soomaaliya ay imaanaysaa xilli marxalad kala guur ah ay gelayaan maamullada dabadhilifyada ah ee dalka kajira islamarkaana ciidamada AMISOM isku diyaarinayaan bixitaan.
Micheal Keating ayaa intii uu xilka hayay wuxuu dullaystay hoggaamiyaasha dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul goboleeyada uu ku shirinayay xerada Xalane wuxuuna ahaa illaa iyo haddana yahay xaakimka dhabta ah ee Soomaaliya marka loo eego sida uu shaqooyinka ugu qeybinayay madaxda Soomaalida.
Xarakada Al Shabaab ayaa dhankeeda sare uqaadday weerarada ay ku beegsanayso ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka DF-ka waxayna xarakadu isku diyaarinaysaa hanashada dhulka ay banayn doonaan ciidamada soo duulayaasha Midowga Afrika.